कोरोनाबाट संविधानसभाका पूर्वसदस्य चौधरीको मृत्यु « Pariwartan Khabar
27 October, 2020 4:14 pm
संविधानसभाका पूर्वसदस्य मानपुर चौधरीको कोरोना संक्रमणबाट आज निधन भएको पुष्टि भएको छ । सप्तरी, कञ्चनरुप नगरपालिका –४ जगतपुर निवासी चौधरीको उपचारका क्रममा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो ।
सोही दिन उहाँको स्वाब संकलन गर्दा असोज ३ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । चौधरी मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित थिए ।
दुई साताको अन्तरालमा दुई पटक कोरोना परीक्षण गराउँदा उनमा पहिलो पटक नेगेटिभ र दोस्रो पटक पोजेटिभ देखिएको थियो ।
कोरोना पोजेटिभ आएपछि प्रतिष्ठानको आइसोलेशनमा उपचारकै क्रममा उनको आज मृत्यु भएको नगर प्रमुख वसन्तकुमार मिश्रले बताए । चौधरी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । यससँगै सप्तरीमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण २४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ६ सय ६९ नयाँ संक्रमित थपिदाँ ५ हजार ६ सय ९९ ले जिते कोरोना
एनआरएनए कोभिड–१९ तथ्यांक : ९१ प्रतिशत नेपाली कोरोनामुक्त
हरेक दिन तातोपानीको सेवनले जित्न सकिन्छ यस्ता रोगहरु…
‘नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई दुव्र्यवहार गर्नेहरुलाई कारबाही गछौं’ : नेकपा बागमती प्रदेश
यसरी सम्पन्न भयो भिजु र रेश्माको मेहेन्दी समारोह….(भिडियो सहित)
भारती पक्राउ परेपछि कपिल शर्मा शो मा मच्चियो हंगामा, के भन्छन् त कपिल ?
विदेशबाट नेपाल आउनेलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राखिने
बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्यायो नयाँ कानुन